eNasha.com - सुरक्षाका लागि खटिँदा उल्टै धरापमा !
सुरक्षाका लागि खटिँदा उल्टै धरापमा !
तपाइँले रोबोकपका बारेमा सुन्नु भएको छ ? तपाइँले यही नामको टेलिश्रृङ्खला या सिनेमा हेर्नु भएको भए त मैले केही बताइरहनै परेन तर हेर्नु भएको छैन भने बताइदिई हालुँ । यो रोबोकप भनेको रोबोट प्रहरी हो । जसले कठिन कामहरु गर्न डर मान्दैन ।
त रुसमा के भयो भने त्यहाँ बढ्दो आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न रोबोकपलाई उपयोग गर्न थालिएको छ । यो पहिलो सदस्य रोबोट प्रहरी थियो, जसलाई आपराधिक क्रियाकलाप कसरी रोक्ने भन्ने तालिम दिइएको थियो । तर ऊ काममा जाने पहिलो दिन नै उसमाथि दुर्घटना घट्न पुगेको छ ।
एनोनोभा समाचार एजेन्सीका अनुसार आफ्नो अभियानमा कस्सिएर निस्किएको थियो कि गर्जेर बादल कड्क्यो र त्यसले पानी बर्षाइदियो । पानीका कारण रोबोकपको विद्युतीय लाइनमा गडबडी भयो र अभियानमा निस्कनुअघि नै अभियान रद्द गर्नुपर्ने भयो ।
६ फिट अग्लो अण्डाको आकारजस्तै रोबोटको गोडा चाहिँ पैँयायुक्त रहेको थियो । जसलाई रसियाली प्रहरी र पूर्वी रसियाली शहर परेम शहरी प्राधिकरणले संयुक्त रुपमा लगानी गरेका थिए ।
यो रोबोट प्रहरीको शरीरभित्र केही क्यामेरा र 'सेन्सर' प्रणाली जडान गरिएको छ, जससँग भएका डाटालाई उसले अध्ययन गरेर व्यक्ति अपराधी हो कि सर्वसाधारण खुट्याउँछ र उसलाई पक्डन्छ । उसले शहरभरिको अवस्थालाई अध्ययन गरी अन्य प्रहरी अधिकारीहरुलाई चौकस रहन समय समयमा खबर पठाउने गर्दछ ।
यस्तो रोबोट प्रहरीलाई शहरभित्रका गतिविधि अवलोकन गर्न पठाउँदै गर्दा पानीमा रुझेर विद्युत सर्किटमा भएको गडबडीका कारण उसको हेरदेख गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले उसलाई फिर्ता बोलाए । र, पछि उसको विद्युतीय गडबडीलाई ठीक पारिएको थियो ।
अधिकारीहरुका अनुसार भारी वर्षाका कारण रोबो-प्रहरीको शरीरको छिद्रा हुँदै पानी छिर्‍यो र यसको विद्युतीय सर्किटलाई गडबड बनाइदियो । अधिकारीहरुका अनुसार यो रोबो-प्रहरी एउटा मात्र उत्पादन गरिएको थियो । यसको कामको शैली र अन्य कारवाही हेरेर यस्तै रोबो-प्रहरी भविष्यमा अन्य पनि उत्पादन गरिनेछ ।
उदेकलाग्दो प्रविधि माया बलिउड सेलेब्रिटी सुन्दरी गुगल भव्यता मूर्ख्याइँ विज्ञापन मुद्दा मामिला इन्टरनेट नग्नता उपाय परिस्थिति फट्याइँ कीर्तिमान हलिउड श्रीमानश्रीमती सेक्स